26 / 03 / 2022 /i rheumatism/av olimalayo
Intwasahlobo yisikhathi abaningi bethu abasibongayo, kodwa labo abane-rheumatism bavame ukukwazisa kakhulu. Lokhu kusho ukuthi abaningi abanokuxilongwa kwe-rheumatic basabela esimweni sezulu esingazinzile, izinguquko zomfutho womoya kanye nokushintshashintsha kwezinga lokushisa.
Ukuthi ama-rheumatologists asabela ekushintsheni kwesimo sezulu kubhalwe kahle ocwaningweni (1). Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi izinhlobo ezahlukene ze-rheumatism zithinteka kakhulu izinhlobo ezithile zokushintsha kwesimo sezulu - nakuba sikwenza kucace ukuthi lokhu kungahlukahluka ngakunye.
- Izici zesimo sezulu osabela kuzo zingahluka
Ngokwesibonelo, kuye kwabonakala ukuthi izinguquko zomfutho womoya kanye noshintsho lokushisa kwabathinta kakhulu labo abanesifo samathambo. Izinga lokushisa, imvula kanye nengcindezi ye-barometric kwakuxhunyaniswa ikakhulukazi nokubi kakhulu kulabo abanesifo samathambo. Iziguli ezine-fibromyalgia zisabele ikakhulukazi ekushintsheni kwe-barometric - njengalapho isimo sezulu sisuka kumfutho ophansi siye kophezulu (noma okuphambene nalokho). Ezinye izici ongasabela kuzo umswakama kanye nokuzinza kwesimo sezulu ngokuhamba kwesikhathi.
Amathiphu amahle futhi asheshayo: Uqale ngokuhamba okude? Ngaphansi kwesihloko ungabuka ividiyo enezivivinyo zokuzivocavoca zobuhlungu emilenzeni. Siphinde futhi sinikeze amathiphu ezilinganisweni zokuzenza ngokwakho (njenge amasokisi wokucindezela ithole og amasokisi wokucindezela we-plantar fasciitis). Izixhumanisi zivuleka efasiteleni elisha.
- Eminyangweni yethu ehlukahlukene eVondtklinikkene e-Oslo (Lambertseter) kanye noViken (Eidsvoll Sound og I-Råholt) odokotela bethu banekhono elikhethekile elikhethekile ekuhloleni, ekwelapheni nasekuqeqesheni ukuhlunyeleliswa kobuhlungu obungapheli. Chofoza izixhumanisi noma wakhe ukufunda okwengeziwe ngeminyango yethu.
Kule Ndatshana Uzofunda Kabanzi Mayelana:
Kuyini Ukuzwela Kwesimo Sezulu?
Ngakho-ke, iNtwasahlobo yisikhathi esihle samaRheumatists
Ukuthi Ukuzwela Kwesimo Sezulu Kungabangela Kanjani Izikhathi Ezimbi
Izinyathelo zokuzithatha kanye nezeluleko ezinhle ngokumelene nokushintsha kwesimo sezulu
Ukuzivocavoca nokuQeqesha ngokumelene neLegg Cramps (kufaka ne-VIDEO)
'Ezinsukwini zakudala' umuntu uvame ukukhumbula inkulumo ethi 'Ngiyizwa ku-gout'. Ezikhathini zamuva nje, kuye kwafakazelwa ngaphandle kokungabaza ukuthi izici zesimo sezulu zingathinta ngempela ubuhlungu nezimpawu phakathi kwe-rheumatologists (2). Lezi zici zihlanganisa, kodwa azikhawulelwe kulokhu:
Umfutho we-Barometric (umfutho womoya)
Umfutho womoya uyashintsha
Ukushintsha kwesimo sezulu njalo
Njengoba sekushiwo, abantu abanokuxilongwa kwe-rheumatic bangase basabele ngendlela ehlukile ezicini zezulu ezahlukene. Izinguquko zenzeka phakathi kwalabo abanokuxilongwa okufanayo. Abanye abantu bangase bezwe ubuhlungu obukhulayo bemisipha kanye nokuqina kwamalunga lapho imvula ikhuphuka futhi nomswakama ukhuphuka. Abanye bangase bazizwe ngendlela yokwanda kwezigameko zekhanda kanye nezinye izimpawu ze-rheumatic.
Intwasahlobo ngokuvamile iyinkathi ezinzile kunokuba, isibonelo, ekwindla nobusika. Ngalokhu, siphinde sicabange ukuthi abantu abaningi abane-rheumatism basabela esimweni sezulu esibanda kakhulu kanye nenani elikhulayo lemvula (kokubili ngendlela yemvula neqhwa). Ngakho-ke, lesi yisikhathi sonyaka esilungele kangcono i-rheumatologists. Kunezici ezimbalwa ezinhle ezenza le sizini ibe ngcono:
Izinga lokushisa elinethezekile
Ukukhanya kwemini okwengeziwe nokukhanya kwelanga
Izehlakalo ezincishisiwe 'zokuduma'
Phakathi kwezinye izinto, singabheka idatha yesimo sezulu ukuthi umswakama ojwayelekile e-Oslo usuka ku-85% no-83% ngoJanuwari noFebhuwari, ngokulandelana - ukuya ku-68% no-62% ngoMashi no-April (3). Izazi zezifo zamathambo eziningana nazo zibika izinga eliphezulu lokuphila kanye nokuncipha kwezimpawu lapho izinga lokushisa lesimo sezulu lizinza ngokwesilinganiso esiphezulu. Ukuthi futhi kukhanya kakhulu ngezinsuku nokuthi ukwazi ukufinyelela okwengeziwe ekukhanyeni kwelanga nakho kuyizici ezimbili ezinhle kakhulu.
Ukuthi Ukuzwela Kwesimo Sezulu Kungabangela Kanjani Ukuwohloka Kwe-Rheumatic
Nakuba ucwaningo lungcono kakhulu kulo mkhakha kunalokho olwaluyikho, kusekuningi esingakwazi. Siyazi ukuthi kukhona izifundo ezinhle zocwaningo ezibhale ukuxhumana phakathi kwesimo sezulu nezinkathi zonyaka ezinomthelela wezimpawu ze-rheumatic. Kodwa asinaso isiqiniseko sokuthi kungani. Nokho, kunezinkolelo-mbono eziningana - kuhlanganise nalezi ezilandelayo:
Izinguquko ekucindezelweni komoya we-barometric, isibonelo ekucindezelweni okuphansi, kungabangela i-tendon, imisipha, amalunga kanye nezicubu ezixhumeneyo. Ngakho-ke lokhu kubangela ubuhlungu ezicutshini ezithintwa i-rheumatism.
Amazinga okushisa aphansi angandisa ukushuba kwe-synovial synovial fluid eyenza amalunga aqine.
Ngokuvamile awunyakazi kangako uma isimo sezulu sisibi futhi kubanda. Ukunyakaza okuncane ekuphileni kwansuku zonke kungandisa izimpawu nobuhlungu.
Izinguquko ezinkulu zesimo sezulu nezivunguvungu ezinhle zivame ukusiphazamisa isimo sethu sengqondo. Siyazi futhi ukuthi uma uzizwa udangele, lokhu kungase kubhebhethekise ubuhlungu nezimpawu ezaziwayo.
Ucwaningo olukhulu olunababambiqhaza abangu-2658 olushicilelwe kujenali yocwaningo i-Nature lusekele lokhu okutholakele (4). Lapha, abahlanganyeli baceliwe ukuba babhale ubuhlungu, izimpawu, ukuqina kwasekuseni, izinga lokulala, ukukhathala, isimo sengqondo kanye nezinga lomsebenzi.
Imiphumela ibonise ukuhlobana okuphawulekayo, nakuba kulinganiselwe, phakathi kobuhlungu obubikiwe kanye nezici ezifana nomswakama, ukucindezela kwe-barometric nomoya. Uphinde wabona ukuthi lokhu kuphinde kwadlulela kanjani ngaphezu kokubili kwemizwa nokusebenza komzimba phakathi kwabahlanganyeli.
Lapha siza neziphakamiso zezinyathelo zethu ngokumelene nokushintsha kwesimo sezulu. Abaningi benu cishe bajwayelene nokuningi kwalokhu, kodwa sisethemba ukuthi abaningi benu bangazuza kwezinye zezeluleko.
Iseluleko ngokumelene nokushintsha kwesimo sezulu
Gqokela isimo sezulu - futhi njalo ulethe izendlalelo ezengeziwe. Abantu abaningi abane-rheumatism baba nezilonda ezibandayo kanye nokushintsha kwezinga lokushisa emini. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuletha izingubo ezengeziwe ukucabangela lokhu. Letha isikhafu, isigqoko, amagilavu ​​nezicathulo ezinhle uma usohambeni - ngisho noma isimo sezulu sibukeka sizinzile.
Gqoka amasokisi okucindezela kanye namagilavu ​​okucindezela. Lezi yizingubo zokucindezela ezenziwe ngokukhethekile ukuze kugcinwe ukujikeleza ezandleni nasezinyaweni, okungase kukusize ugcine izinga lokushisa. Zingasetshenziswa kahle ngaphansi kwezinhlobo eziningi zamagilavu ​​nama-mittens.
Gcina izinga lomsebenzi. Ezikhathini ezibandayo ezifana nekwindla nobusika, sinokuthambekela kokukhathala kokungenzi lutho. Kodwa siyazi ukuthi ukuvivinya umzimba kubaluleke kakhulu ukugcina izimpawu zisesimweni. Ukuhamba, ukuqeqesha amandla nokuzivocavoca umzimba kungakusiza ezinhlungwini nokuqina.
Izinga eliphansi le-vitamin D? Abaningi bethu banamazinga aphansi kavithamini D phakathi nangemuva kokumnyama. Khuluma nodokotela wakho uma usola ukuthi lokhu kungase kusebenze nakuwe.
Sebenzisa ukwelapha ukushisa: Iphakethe lokushisa elisebenziseka kabusha kanye / noma ukugeza okushisayo kungakusiza ekudambiseni ukungezwani kwemisipha kanye nokuqina kwamalunga.
Ithiphu 1: Izingubo zokucindezela zemilenze, izinyawo nezandla
Ukusetshenziswa kwezingubo zokucindezela kuyindlela elula yokuzilinganisa okulula ukuthola izindlela ezinhle maqondana nokusetshenziswa. Zonke izixhumanisi zezinsiza ezingezansi zivuleka efasiteleni elisha lokufunda.
Amasokisi okucindezela umlenze (isebenza kahle uma unenkani)
Amasokisi Okucindezelwa KwePlantar Fascitt (ilungele ubuhlungu bezinyawo kanye ne-plantar fasciitis)
Ngezixhumanisi ezingenhla ungafunda kabanzi mayelana nezinyathelo zokuzithiba - futhi ubone amathuba okuthenga.
Amathiphu 2: Iphakethe Lokushisa Elisebenzekayo
Ngeshwa, ukungezwani kwemisipha nokuqina kwamalunga yizinto ezimbili ezixhumene ne-rheumatism. Ngakho-ke sincoma ukuthi wonke ama-rheumatologists abe ne-multipack etholakalayo. Uvele uyishisise - bese uyibeka endaweni eshubile futhi eqinile. Kulula ukuyisebenzisa.
Ukwelashwa Kwemisipha Engapheli kanye Nobuhlungu Bamalunga
Akumangazi ikakhulukazi ukuthi abantu abaningi abanobuhlungu obungapheli bafuna ukwelashwa ngokomzimba. Eziningana zibika imiphumela emihle nepholile yezindlela zokwelapha ezifana nokwelashwa kwefindo lemisipha, ukutshopa kwe-intramuscular kanye nokuhlanganisa amalunga.
Uyafuna Ukubonisana Emitholampilo Yezinhlungu?
Siyajabula ukukusiza ngokuhlola nokwelashwa komunye wemitholampilo yethu esebenzisana nayo. Lapha ungabona isifinyezo lapho sitholakala khona.
Imitholampilo Yethu Exhumene
Ukuzivocavoca nokuqeqeshwa kwakho ofuna ukuhamba kakhulu
Mhlawumbe unesifiso sokuhamba ngezinyawo eziningi noma ezinde kule ntwasahlobo? Lapha sibonisa uhlelo olude lwemizuzu eyi-13 olwalwenzelwe labo abane-hip osteoarthritis. Khumbula ukuthi uma ungakwazi ukusukuma nokwehla phansi, leyo ngxenye yesimiso ingase ishiywe imile. Sincoma ukuthi uzame ukulandela futhi uziqeqeshe nathi ngevidiyo - kodwa isebenza kahle uma ungeke ukwazi ukuyenza ngejubane elifanayo noma ngesivinini. Zama ukwenza umkhuba ukufaka lolu hlelo lokuzivivinya ku-TV noma i-PC yakho - okungcono kakhulu kathathu ngesonto. Zizwe ukhululekile ukusithinta esigabeni sokuphawula esingezansi kwalesi sihloko noma esiteshini sethu se-Youtube uma unemibuzo onomuzwa wokuthi singakusiza ngayo.
I-VIDEO: Uhlelo Lokuzivocavoca lwemizuzu engu-13 lwe-Hips kanye ne-Back
Yiba yingxenye yomndeni! Zizwe ukhululekile ukubhalisa mahhala esiteshini sethu se-Youtube (chofoza lapha).
1. Guedj et al, 1990. Umphumela wezimo zezulu ezigulini ezinesifo samathambo. U-Ann Rheum Dis. 1990 Mar; 49 (3): 158-9.
2. Hayashi et al, 2021. Ukuzwela kwesimo sezulu okuhlobene nezinga lempilo ezigulini ezine-fibromyalgia. I-BMC Rheumatol. 2021 Meyi 10; 5 (1): 14.
Isimo sezulu nesimo sezulu esimaphakathi e-Oslo. Ngokusekelwe kuzibikezelo zesimo sezulu eziqoqwe esikhathini sika-3–2005.
4. Dixon et al, 2019. Indlela isimo sezulu esithinta ngayo ubuhlungu bososayensi bezakhamuzi abasebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-smartphone. Npj Digit. Nge. 2, 105 (2019).
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Sol.jpg?media=1648573622 400 600 olimalayo https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 olimalayo2022-03-26 17:46:002022-05-31 21:04:04I-Rheumatism ne-Spring
I-Fibromyalgia ne-Leg Cramps I-Fibromyalgia kanye Ne-Central Sensitization